EyeDwarha 5, 2018 admin
Umcebisi Top Wall Street URic Edelman ucacisa ukuba kutheni na yasenza kwi Bitcoin
URic Edelman, edume zimali Wall Street, umcebisi kunye nombhali, ufake imali Bitwise Asset Management, ngumdali wokuqala index cryptocurrency mali yehlabathi. Edelman naye ukhonza njengoko umcebisi ukuba inkampani. Kudliwano-ndlebe-mali uthe iziphumo cryptocurrency zikude-efikelela. Edelman Wathi abacebisi zemali kufuneka bazifundise malunga crypto kunye blockchain.
"Mna yasenza kuwo kuba Bitcoin ngoku iminyaka elishumi ubudala. Yi $200 billion yemarike zizonke crypto, Bitcoin imalunga 40% ukuba… Kuyacaca, ukuba apha nihlale. "Edelman nguye usihlalo kunye nentsebenziswano umseki Edelman Financial Services, oko kutshanje ogama umcebisi inombolo enye osetyenzisiweyo utyalo-mali kwi-US ngu Barron kaThixo. Edelman Iinkonzo zeMali uye $22 billion-asethi phantsi kolawulo. Edelman luya kuzimanya kunye Bitwise ukunceda abacebisi bezemali ukuqonda blockchain kunye nendawo crypto. Xa ebuzwa ukuba cryptocurrencies ziludidi asethi ezahlukeneyo izibopho, esitokisini okanye yorhwebo, Edelman waqinisekisa impahla crypto are “ivenkile yexabiso” ezifana negolide, namafutha, kunye neminye imithombo yendalo. "Leli apha ukuze sihlale" Uthe nomcebisi nempembelelo. "Le mini kuya kufika - I Ndiqinisekile, xa Sec kudala, okanye evumela, a Bitcoin ETF. Kwaye iza kutshintsha yonke into. "
EU intengiso mali yomlawuli € 1.1M iliso cryptos & fintech
I-EU-mali kwiimarike zemali njengonogada Ukubekela bucala phezu € 1 yezigidi esweni, nokuhlanganiselwa ngolwazi lobuntlola cryptocurrencies kunye neminye imisebenzi fintech ngexesha 2019. Njengoko kubonisiwe yayo 2019 Inkqubo Work yonyaka - yakhululwa namhlanje - i-European Securities and Markets Authority (Esma) ezidweliswe izinto zalo eziphambili kunyaka ozayo. I-arhente ithi ijonge ukukhusela kakuhle-ntle yezimali awodwa lezoqoqosho, kuthatha a “kugxile ikakhulu” eku sunguleni yemali kuquka ii-asethi crypto, oqhube ngenkuthalo ukhangela imiba kunye nemingcipheko enxulumene nemisebenzi efana.
Ukwanceda nokulungelelanisa imizamo imithetho malunga nokubek 'esweni lemarike mmandla kunye nokukhuthaza ngezona ndlela zingcono, kubandakanya ukunika iingcebiso okanye isindululo “amanyathelo afanelekileyo apho kuyimfuneko.” njongo iphambili ye Esma kunyaka-ozayo, lithi, ukuba: “Azuze indlela elungelelanisiweyo nalo mqathango yokuzolusa unyango imisebenzi mali omtsha okanye ezintsha nokunika iingcebiso ukuba bammise phambi kumaziko EU, nxaxheba market okanye abathengi.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 04.10.2018
$71.1M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin, Give t...